Imikhonyovu enezingcingo zeWhatsApp | Kusuka kuLinux
Imikhonyovu enezingcingo zeWhatsApp
I-Las Izingcingo zeWhatsApp yisici esisha esivumela, ngohlelo lokuxoxa, ukwenza izingcingo zezwi usebenzisa i- isilinganiso sedatha noma ukuxhumeka kunethiwekhi ye-Wi-Fi. Iqale ukuvela muva nje kumadivayisi athile, futhi yasakazeka kubo bonke abanye abasebenzisi ngohlelo lwesimemo, okungukuthi, ukuze wenze kusebenze umsebenzi wokushaya ku-WhatsApp, udinga ukuthola isimemo noma ikholi yezwi ye-WhatsApp evela kothile osevele insizakalo inikwe amandla.
Kodwa-ke, kusukela ngamahemuhemu wokusebenza kwe- Izingcingo zeWhatsApp babe semithonjeni yezindaba izinyanga ezimbalwa, abasebenzisi abangenasineke kakhulu bazame konke okusemandleni abo ukuthola lesi sici kuma-smartphone abo.
Imikhonyovu enezingcingo zeWhatsApp por ukhaphethi
Kunamawebhusayithi amaningi nama-athikili akhombisa ukuthi uhlelo lokusebenza lungakhohliswa kanjani ekwenzeni umsebenzi owufunayo. Uma seyenziwe yasebenza, izingxenye ezintathu (amathebhu) ziyabonakala: izingcingo, izingxoxo noxhumana nabo, lapho owokuqala uzokwazi khona ukubuka izindaba zezingcingo zezwi ezenziwe.
Kepha, ngenxa yesifiso esikhulayo sabasebenzisi sokukwazi ukushaya izingcingo zamahhala, abantu abaningi, noma izigebengu ze-cyber, bayisebenzise ngokunakekela umkhonyovu omusha: I-WhatsApp ibiza umkhonyovu.
Konke kugxile kuzimemo. Khumbula! WhatsApp Ngeke ikuthumele isimemo ngale ndlela, izokwenza insiza isebenze ngokuzenzakalela. Futhi ngeke ikubuze ukuthi uqedele inhlolovo, ulande uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu, noma uvakashele ikhasi lewebhu ukuze ufinyelele insizakalo.
El kubaduni umlayezo kuqinisekisa ukuthi uma ulandela imiyalo yabo, ungazivula izingcingo.
Kukhonjiswa ukuthi umsebenzisi owamukela lo mbhalo umenyiwe ukuthi avivinye umsebenzi wokushaya weWhatsApp onombandela owodwa wokuthumela isimemo kubantu abengeziwe abayishumi.
Lapho usuthumele umkhonyovu kubangani abayi-10 (ngokunengqondo, bengazi), bakutshela ukuthi uchofoze inkinobho 'yokuqhubeka' nangalokho, ukuze ukwazi ukwenza kusebenze call umsebenzi.
Yilapho ukukhohlisa kuqala khona! Ngokuchofoza inkinobho "Qhubeka", kuvulwa iwebhusayithi, okuzokuyisa kwinhlolovo. Okuwukuphela kwendlela yokuyiqeda futhi okuthiwa uthola insizakalo abayithembisayo ukulanda uhlelo lokusebenza olufaka izindleko eziphezulu.
Uma ungena kulolu gibe, izingcingo ngeke zenziwe zisebenze noma kanjani, futhi isigebengu sikwenze ukuthi uvakashele iwebhusayithi, ukuthi ulande uhlelo olukhokhelwe futhi, kwezinye izimo, ukuthi I-malware lokho kungadala ukulimala ku-smartphone yakho, imvamisa engalungiseki. Noma kunjalo, okubi kakhulu kuzoba ukufinyelela kuyo yonke imininingwane yakho eyimfihlo, kusuka ezithombeni nakumavidiyo, ezingxoxweni nakumaphasiwedi, kokubili kuma-akhawunti wezokuxhumana kanye namakhadi wesikweletu.
Uma uthola umlayezo ovela kumngane onokuthile okubonakala ku:
Sawubona, ngikumema ukuthi uzame izingcingo ze-WHatsApp. Chofoza lapha ukuze uzenze zisebenze: http://WhatsappCalling.com
Ungawi! Kalula ungakunaki, futhi ungayithumeli komunye umuntu. Kubuye kube lula susa umyalezo ikakhulukazi ukugwema ukuyichofoza ngengozi ngokuzayo, ikakhulukazi uma unezingane ezinokufinyelela ku-smartphone yakho.
Into enhle kulezi zimo ukusebenzisa ingqondo:
I-WhatsApp ayisoze ikuthumelela imilayezo ikakhulukazi. Bekungasebenza insiza ngokuzenzakalela.
Akunasizathu lapho bengizokukhokhisa ngokulanda, kungasaphathwa ukuthi uqede ucwaningo.
Akekho umngani ongakuthumela isixhumanisi esinesimo sokusidlulisela kubantu abayi-10, ngaphandle kwalapho kuba uchungechunge logaxekile noma igciwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Imikhonyovu enezingcingo zeWhatsApp
Kufanele uqaphele imikhonyovu ngeWhatsApp nanoma iziphi ezinye izindlela, abanobuhlakani, abaduni kanye nabangane bokwenza imali esheshayo nelula ngokuqola nokukhohlisa abantu babazi bonke, manje sekuneyingozi lapho iluma khona kakhulu Abantu ngokungazi ubhalisela izinsizakalo ze-premium sms futhi uthola izikweletu eziphakeme kakhulu, ngishiya isixhumanisi ukuze usibone futhi uqaphele ngoba sikhula kakhulu: http://www.adescargarwhatsapp.com/usan-emoticonos-para-robar-informacion-en-whatsapp/
I-Social ERP ifinyelela emhlabeni womthombo ovulekile ngenxa yeLibertyaERP